बाबु बनेपछि साहिदका अनुभव::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
बाबु बनेपछि साहिदका अनुभव
छोरी मीसा जन्मेपछि बलिउड अभिनेता साहिद कपुरको संसार पूरै बदलिएको छ । यो त उनी स्वयंले नै स्वीकारेको कुरा हो ।
अब उनी आफैँलाई बढी जिम्मेवार र ‘सेटल’ भएको महसुस गर्छन् । यही सन्दर्भमा भारतीय मिडिया दैनिकभास्करडटकमले साहिदलाई चार प्रश्न सोधेको छ । ती प्रश्नमा साहिदका जवाफ:
१. बाबु बनेपछि तपार्इंमा के परिवर्तन आयो ?
म अत्यन्त राम्रोसँग सेटल भएको छु । अब म कुनै पनि विषयमा भावानात्मक तथा मानसिक रूपले जोडिन थालेको अनुभव गरिरहेको छु । यस्तो अनुभवले नयाँ ढंगबाट विषयलाई हेर्ने मौका दिँदो रहेछ । जो पनि जब बाबु बन्छ, उसको सोच्ने तरिका पूरै बदलिन्छ ।
२. के अब यसले तपार्इंका फिल्ममा पनि प्रभाव पार्छ ? पार्दैन ।
यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो । आफैँ हुन्छ । यो एउटा सिकाइको अवसर पनि हो । यसमा सही र गलत भन्ने केही पनि हुँदैन । तर, त्यसैले मलाई कुनै अफर अलग र उत्साहित गर्ने लाग्छन्, म ती काम गर्नेछु । यदि कुनै उत्साहित गर्ने खालका अवसर त आउँछन् तर फरक हुँदैनन्, म ती विषयमा सोच्नेछु ।
३. यसबीचमा के तपार्इंले छोरीको डायपर फेर्नु पनि भएको छ ?
मैले कैयौँपटक मीसाको डायपर फेरेको छु । समस्याचाहिँ के हो भने हामीलाई यो सबै कुराको अनुभव राम्रोसँग हुँदैन । तर, म सबैथोक गर्न तयार छु । मैले सबै थोक गरेको पनि छु ।
४. एकपटक तपाईंले भन्नुभएको थियो– तपार्इंलाई आफ्नो बुवालाई मनपर्ने केही पनि मन पर्दैन । अबचाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
म आफूलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छु कि, म आफ्नो पिताजस्तो छैन । तर, वास्तविकता के हो भने म पिताजस्तै छु । यस्ता कयौँ विषय छन्, जो ममा र बुवामा समान छन् । मेरी आमा र मीरा दुवै मलाई भनिरहेका हुन्छन्, ‘तिमी आफ्नो बाबुजस्तै छौ ।’